Isitolo esidayisa yonke impahla 36 ″ W x 18, D x 72 ″ H 5-Shelf Painted Galvanized Steel Wire Boltless Rivet rack Manufacturers and Suppliers | ABC
I-heavy-duty 5-layer-boltless racking rack, enomklamo wensimbi omise okwe-Z nobuso obuhlaza okwesibhakabhaka, ukuhlela izingcezu ezinkulu egumbini lakho elingaphansi, eshabhu, egaraji, enkampanini, noma kunoma iyiphi indawo lapho kudingeka khona ukubekwa mpo okusindayo Isixazululo esihle sokugcina izinto.
Uhlaka lwayo oluqinile lunendawo embozwe yimpuphu emelana nokuhuzuka, ukuqhephuka nokugqwala, okuholela ekuqineni okuhlala isikhathi eside nokuqina. Le yunithi eshalofini eguquguqukayo ingagcina izinto ezinobukhulu obuhlukahlukene, futhi ishelufu elilungile lingashintshwa njalo ngamasentimitha angu-1.5. Akunankinga ngezinto ezisindayo; ishalofu ngalinye lingagcina isisindo esilinganiselwe samakhilogremu angama-500. Isembozo saso sensimbi sivumela amanzi amaningi ukuba angene kusuka kokufafaza okuphezulu, avumela ukukhanya nomoya ukuba ujikeleze, futhi kusiza ukuvimbela isikhunta, isikhutha nothuli. Umklamo we-rack modular uvumela ukuthi i-unit iqoqwe ibheke phezulu njengeyunithi elilodwa lamashalofu, noma njengeyunithi yedeskithophu engu-2. Idizayini engena-bolt yefreyimu kanye ne-coupler yekholomu ehambisana nayo ikuvumela ukuthi uqedele umhlangano ngemizuzu ngaphandle kwesidingo samantongomane noma amabhawodi.
I-1.5-layer shelving unit esetshenziselwa ukuhlela izinto ezinkulu ezindlini ezingaphansi, ama-workshops, amagaraji, izinkampani, noma noma yikuphi lapho kudinga isitoreji esima mpo esindayo.
I-2.Boltless rack yokubeka insimbi enamashalofu wensimbi ensimbi angama-5 angahle afinyelele kuma-2500 amakhilogremu.
3.Ishalofu lingalungiswa ekukhushulweni kwama-intshi angu-1.5.
Kwakhiwe njengeshalofu elilodwa lokugcina noma amayunithi amabili eshalofu lokuphakama.
Uhlaka lwensimbi 5.I-Heavy-duty ene-powder eluhlaza okwesibhakabhaka yamandla nokuqina.
6.Ishalofu lensimbi lensimbi lingenza amanzi okufafaza umlilo angene kakhulu, enze ukukhanya nomoya kujikeleze kakhulu, futhi kuvimbele ukuhlangana kothuli.
7.Ikholomu coupler ithuthukisa ukuzinza futhi inikeze umhlangano wekholomu osheshayo futhi olula.
Langaphambilini Amashalofu angama-30kgs okhanyayo ahlala eqinile ensimbi eshisiwe ukuze kusetshenziswe ikhishi
Olandelayo: Ama-Abctools Rack 48, W x 24, D x 72 ″ H 5-Shelf Heavy Duty Heavy Ductile Insimbi Yensimbi Yokufaka Amasheya Wokugcina Isitoreji
I-Boltless Garage Shelving
I-Boltless Rivet Shelving
1.2 mm ukujiya lashukumisa steel sheet isitoreji ...
175kg 350kg 265kg duty esindayo lashukumisa steel b ...
I-Abctools Rack 48 ″ W x 24, D x 72 ...
5-Shelf Steel Wire Garage Isitoreji Shelving Unit ...
Amayunithi Wokushefa Amakamelo Okulala Amashalofu Ekhaya Amayunithi Wokugcina Amasheya Okuhweba Indawo Yokubeka Amashelufa Ishelufu Yesitoreji Esincane I-White Storage Shelf Unit